के हो सुरक्षित गर्भपतन ? सुरक्षित गर्भतन गर्ने यस्तो छ तरिका – Everest Dainik – News from Nepal
के हो सुरक्षित गर्भपतन ? सुरक्षित गर्भतन गर्ने यस्तो छ तरिका
महिलाको मन्जुरीमा कानुनले मान्यता दिएअनुसार सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मी वा नर्सद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्यसंस्थामा गरिने गर्भपतनलाई सुरक्षित गर्भपतन भनिन्छ ।
सुरक्षित गर्भपतन गर्ने प्रमुख २ तरिका छन्ः
१. औषधिको प्रयोगद्वारा
२. उपकरणको प्रयोगद्वारा
० सुरक्षित गर्भपतनका लागि कुन विधि बढी प्रभावकारी छ ?
उपकरणको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन
उपकरणको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको स्वास्थ्यसंस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकारबाट अनुमति पाएका अर्थात् सूचीकृत दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्वारा मात्र गराइन्छ ।
० के उपकरणको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतनमा पीडा हुन्छ ?
० के उपकरणको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतनले महिलाको प्रजनन क्षमतामा कुनै असर गर्छ ?
यसले महिलाको प्रजनन क्षमतामा कुनै असर गर्दैन । यस विधिको प्रयोगपश्चात् २ देखि ३ हप्तामै प्रायः महिलामा डिम्ब निष्कासन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । गर्भपतन गराएको केही हप्तामै गर्भ रहन सक्छ।
० उपकरणको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन गराएको कति समयमा महिनावारी सुरु हुन्छ ?
० उपकरणको प्रयोगद्वारा गर्भपतन गराएको कति समयपछि परिवारनियोजनका साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ ?
औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन
० के औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन सुरक्षित हुन्छ ?
० के औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतनले महिलाको प्रजनन क्षमतामा कुनै असर गर्छ ?
० औषधिको प्रयोगद्वारा गर्भपतन गराएको कति समयमा महिनावारी प्रक्रिया सुरु हुन्छ ?
० औषधिको प्रयोगद्वारा गर्भपतन गराएको कति समयपश्चात् यौनसम्पर्क राख्न मिल्छ ?
महिलाले औषधिको प्रयोगद्वारा गर्भपतन गराएको १ हप्तासम्म यौनसम्पर्क नराख्न सल्लाह दिने गरिन्छ।
० औषधिको प्रयोगद्वारा गर्भपतन गराएको कति समयपछि परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ ?